ကွတ်ကီးများ Emulator.online ▷🥇
LSSI-CE သည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ်သည် အသုံးပြုသူအား cookie များတည်ရှိမှုကိုသတိပေးရန်၊ အကြောင်းကြားရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
22.2 / 34 အက်ဥပဒေကနေပုဒ်မ 2002 ။ "ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်သိုလှောင်ရေးကိရိယာနှင့်အချက်အလက်ရယူခြင်းမှ terminal ကိုပစ္စည်းကိရိယာများလက်ခံသူများသုံးနိုင်ပါသည်, ထိုတူညီသောထောက်ပံ့ပေး သငျသညျသူတို့အသုံးပြုမှုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်ပေးပြီပြီးနောက်သူတို့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးပြီအဆိုပါအော်ဂဲနစ်ဥပဒေ 15 / 1999 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီအတွက် data တွေကို processing ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. အထူးသဖြင့်, ဒီဇင်ဘာလ, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ 13 "နဲ့။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်ငါကသတင်းအချက်အလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ၃၄/၂၀၀၂ ၏ပုဒ်မ ၂၂.၂ နှင့်အတူကွတ်ကီးများနှင့် ပတ်သက်၍ အပြင်းအထန်လိုက်နာရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအလုပ်လုပ်သည်၊ တတိယပါတီများကဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အသုံးပြုသော cookies များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုအမြဲတမ်းတင်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာစာသားများ, စာရွက်စာတမ်းများ, ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်တခြားနေရာသိမ်းထားသည့်အတိုရုပ်ရှင်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပြသလျက်ရှိသည်: ဒီဒီက web site ကိုဘက်ပေါင်းစုံဒြပ်စင်များပါဝင်သည်ဘယ်မှာဖြစ်ပွားမှုမှအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။
သင်သည်ဤ website တွင် cookies များကိုဤအမျိုးအစားများကိုကြုံတွေ့ရခြင်းနှင့်အောက်ပါစာရင်းတွင်စာရင်းတွင်မပါဝင်ပေပါလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, ငါကဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သင့်အားတောင်းပန်ပါ၏။ သင်တို့သည်လည်းတတိယပါတီ cookies များကို positioning ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းဆိုဖို့, Cookie ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကြာချိန်နှင့်ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့ privacy ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဒီ website ကိုအသုံးပြုတဲ့ကွတ်ကီးများကို
ဤဆိုဒ်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုကြသည် နှင့် Third-party ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွေ့အကြုံရရှိရန်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်များပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေနိုင်သည်၊ သင်၏အကျိုးစီးပွားအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာများပြသရန်နှင့်သုံးစွဲသူ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုရယူနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ browser ၏သင့်လျော်သော setting များကို အသုံးပြု. ဤအ cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဒေတာများသို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏ကုသမှုကိုငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်တို့ပြုလျှင်, ဒီ site ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိသင့်ပါတယ်။
သင် browsing တည်လျှင်, 22.2 / 34 ဥပဒေ Society ကန်ဆောင်မှုများသတင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းရာမှအပိုဒ် 2002 တွင်ထည့်သွင်းစည်းကမ်းချက်များလက်အောက်တွင်, သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော cookies တွေကိုအသေးစိတ်၏အသုံးပြုမှုသည်။
ဒီ site အကူအညီနဲ့ထံမှ cookies:
ဒီ website မှာအလုပ်စနစ်တကျ Make
တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အတွက် log မှရှိခြင်းကနေသင်တို့ကိုကယ်တင်သင်ဤ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
လာရောက်လည်ပတ်သူစဉ်နှင့်အကြားသင့်ရဲ့ settings ကိုကိုသတိရပါ
အမြန်နှုန်း / site ကိုလုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်
စဉ်ဆက်မပြတ်ဤ website တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဘယ်တော့မှမ:
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောတတိယပါတီ cookies များကိုသင်သိသင့်သည်
တတိယပါတီများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအပါအဝင်အများဆုံးကို web ဆိုဒ်များကဲ့သို့ဤ site ။
ဒီဇိုင်းအသစ်များသို့မဟုတ်တတိယပါတီ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကြံပြုချက်များနှင့်အစီရင်ခံစာများအတွက်ပုံမှန်စစ်ဆေးသည်။ ဤသည်ကရံဖန်ရံခါကွတ်ကီးဆက်တင်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဤပေါ်လစီတွင်မဖော်ပြထားသောကွတ်ကီးများပေါ်လာနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ယာယီ cookies များဖြစ်ကြောင်းအမြဲသိရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအစီရင်ခံရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့သည်လေ့လာမှုနှင့်အကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များသာရှိသည်။ သင်၏ privacy ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော cookies များကိုမည်သည့်အခြေအနေတွင်မျှအသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အတည်ငြိမ်ဆုံး Third-party cookies များကိုတွေထဲမှာသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ထုတ်ပေးသောသူတို့အား, အသုံးပြုသူများက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါကများ၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်မျှအမှု၌နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်ဒေတာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေကြပုံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝက်ဘ်ဆိုက်ကကူညီမှအထူး Google Analytics သည်။
Google Analytics က Google, Inc တို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ web analytics ဝန်ဆောင်မှု, အဘယ်သူ၏အဓိကရုံး 1600 ပွဲကြည့်စင် Parkway ၌တည်ရှိ၏တစ်ဝဲကုမ္ပဏီ, Mountain View (ကာလီဖိုးနီးယား),, CA 94043, အမေရိကန်နိုင်ငံ ( "Google ရဲ့") သည်။
အသုံးပြုသူသည်ဂူဂဲလ်၊ ဂူဂဲလ် + ဂူဂဲလ် + ကွတ်ကီနှင့်ဂူးဂဲလ်မြေပုံများအသုံးပြုသောကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုသူတို့စာမျက်နှာပေါ်ရှိပြprovisions္ဌာန်းချက်များအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Google Adwords Tracking: ကျွန်တော်တို့ဟာ Google AdWords ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းသည်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားညွှန်ပြသောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ထိုအခါ ဖောက်သည်တစ် ဦး ကသင်၏ကြော်ငြာကိုနှိပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဤ cookies များသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာပြီးနောက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီးသင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များမပါ ၀ င်ပါ။
ခြေရာခံခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Google ကစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့် privacy မူဝါဒက။
ဂူဂဲလ် AdWords မှတ်ပုံတင်: ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ပစ်မှတ်ထားသောအွန်လိုင်းကြော်ငြာများကိုကူညီရန် cookies များကိုသုံးသည့်ဂူဂဲလ် AdWords Remarketing ကိုအသုံးပြုသည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကြော်ငြာများပြသရန် Google သည်ဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤကွတ်ကီးများသည်သက်တမ်းကုန်တော့မည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွဲခြားသိနိုင်သောအချက်အလက်မပါ ၀ င်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးသွားပါ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက် နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
အသုံးပြုသူအကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီး AdWords အနေဖြင့်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဆိုပါလူသိရှင်ကြားထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အသုံးပြုသူ devices များ, apps များသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ software တွေသုံးပြီးအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လုပ်ဆောင်သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ရွှေ့လျားရာမှပြသသည်နှင့်အတူအပြန်အလှန် သည်အခြား tools တွေကို Google က (DoubleClick ကွတ်ကီး) ။
DoubleClick ကြော်ငြာတိုးတက်လာဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကွတ်ကီးကိုမကြာခဏလေ့ကြော်ငြာများအဘို့အအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပေါ်အခြေခံပြီးကြော်ငြာတွေပစ်မှတ်ထားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစွမ်းဆောင်ရည်၏အစီရင်ခံတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူပြီးသားမမြင်စဖူးကြော်ငြာတွေဖေါ်ပြခြင်းရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုကြသည်။
ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ကြော်ငြာများအခြို့သော browser များအတွက်ပြသခဲ့ကြရသောခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ cookie ကို၏ ID အသုံးပြုသည်။ တစ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုကြော်ငြာ၏ထိုအချိန်တွင် DoubleClick ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ကြော်ငြာများပြီးသားကြောင်းအထူးသဖြင့် browser မှာပြသခဲ့ကြရသောစစ်ဆေးနိုင်ရန် browser ၏ cookie ကို ID ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါက DoubleClick အသုံးပြုသူပြီးသားမမြင်စဖူးကြော်ငြာတွေဖေါ်ပြခြင်းရှောင်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူပင် cookie ကို၏ ID DoubleClick ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူတစ်ဦး DoubleClick ကြော်ငြာရှုမြင်နောက်ပိုင်းတွင်ကြော်ငြာရှင်ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဝယ်ယူစေရန်တူညီသောဘရောက်ဇာကိုအသုံးပြုသောအခါအဖြစ်ကြော်ငြာတောင်းဆိုမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောစကားဝိုင်း, log ဖို့ခွင့်ပြု ။
DoubleClick ကွတ်ကီးများတွင်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်နိုင်သောအချက်အလက်များမပါ ၀ င်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် cookie သည်အခြား cookie ID နှင့်ဆင်တူသည့်ထပ်ဆောင်းအမှတ်အသားပါရှိသည်။ ဤအမှတ်အသားသည်အသုံးပြုသူယခင်ကဖော်ထုတ်ခဲ့သောကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်။; သို့သော်၊ DoubleClick သည်အခြားမည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားကိုမဆို cookie ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်အချက်အလက်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။
သင်သည်သင်၏ browsing အတွက်အလေ့အထများနှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လမ်းကိုရယူသုံးခြင်း, ဖျောပွသညျ့အကငျြ့နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင်းဆက်စပ်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ဒေတာဖျက်ပစ်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူအဖြစ်: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကဒီ function ကိုပိတ်ထားလျှင်, အသုံးပြုသူရဲ့ browser ကိုပေါ်ထူးခြားတဲ့ ID ကို DoubleClick cookie ကိုကို "OPT_OUT" အဆင့်နှငျ့အစားထိုးနေသည်။ ထူးခြားတဲ့ cookie ကို ID ကိုမရှိတော့လည်းမရှိသောကြောင့်, ဘေးဖယ်ထုတ် cookie ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဘရောက်ဇာနဲ့ဆက်စပ်မရနိုင်ပါ။
WordPress ကို: es သည်မြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီ Automattic, Inc. မှပိုင်ဆိုင်သည့် WordPress ဘလော့ဂ်ထောက်ပံ့ရေးနှင့် hosting ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စနစ်များမှထိုကဲ့သို့သောကွတ်ကီးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှဝက်ဘ်အတွက်တာဝန်ရှိသူ၏ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိမည်မဟုတ်ချေ။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြောင်းလဲပြီး cookies အသစ်များကိုထည့်ပါ။
ဤကွတ်ကီးများသည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသူအားမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှမတင်ပြပါ။ Automattic, Inc. , သည်အခြား cookies များကို အသုံးပြု၍ WordPress ဆိုဒ်များသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ခြေရာခံရန်၊ Automattic ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုပုံနှင့်သူတို့၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုလေ့လာရန်ကူညီသည်။ သင့်ရဲ့ "Cookies" အပိုင်းမှာစုဆောင်းထားပါတယ် သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ.
ဗီဒီယိုကပလက်ဖောင်း YouTube ကိုအဖြစ်ကိုလည်းအသုံးပြုကြသည်
Affiliate ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း (သူတို့ကဤဆိုဒ်ထဲမှာကအစပြုရောင်းအားကိုခြေရာခံဖို့ကို browser cookies တွေကို install):
Amazon.com နှင့် .es: အိုင်ယာလန်။
ကွတ်ကီးလူမှုကွန်ရက်: လူမှုရေးကွန်ယက်များမှ cookies များကို instagram.com အတွက်စာများကြည့်နေစဉ်အတွင်းသင်၏ browser တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဥပမာလူမှုရေးကွန်ယက်တွင် instagram.com အတွက်သီချင်းစာသားများမျှဝေရန်ခလုတ်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ။
ဤဝက်ဘ်သုံးပြီးလူမှုကွန်ယက်မှသက်ဆိုင်ရာဒီကွတ်ကီးတွေကို generate ကြောင်းကုမ္ပဏီများ cookies တွေကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများရှိသည်:
linkedin cookie ရဲ့ပြဌာန်းချက်အရသိရသည် Cookies တွေကိုပေါ်လစီ
Facebook မှာ cookie ကို၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ Cookies တွေကိုပေါ်လစီ
အဆိုပါသီးသန့်တည်ရှိမှုသက်ရောက်မှုတွေတစ်ခုချင်းစီကိုလူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, သင်သည်ဤကွန်ရက်မှာရှေးခယျြထားသော privacy ကိုဆက်တင်ပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်သလိုကြော်ငြာရှင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်, ဤ cookies များကိုထံမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုငျသညျ။
LSSI ၏ပုဒ်မ ၂၂.၂ အရအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုစဉ်ပုံမှန်တပ်ဆင်နိုင်သည့် cookies များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် -
က NAME ကာလ ရည်ရွယ်ချက်
ကိုယ်ပိုင်: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat အဲဒီ session ရဲ့အဆုံးမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံး။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် Store ကိုအသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်နှင့်အစည်းအဝေးများ။
NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz အဆိုပါoactualizaciónဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကနေ2နှစ်ပေါင်း။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအသုံးပြုသူ access ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက် Google ကထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Google Analytics tool ကိုက website ကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဒေတာတချို့ရှိနေပါတယ်: အကြိမ်အရေအတွက်ကအသုံးပြုသူတစ်အသုံးပြုသူဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ရာကနေဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးခရီးစဉ်၏ရက်စွဲများ, လာရောက်လည်ပတ်သူကြာချိန်, စာမျက်နှာသွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် , search engine ကို user က web site ကိုသို့မဟုတ် link ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်အသုံးပြုထားပါတယ်, သင်သည်အသုံးပြုသူ access လုပ်ပါတယ်ရာကနေကမ်ဘာပျေါတှငျ, စတာတွေရွေးချယ် ဒီကွတ်ကီးတွေကိုအတွက် configuration ကိုအကြှနျုပျတို့သညျကိုမွငျအကြံပြုဘယ်ကြောင့် Google ကကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် Google က privacy ကိုစာမျက်နှာ (ကကျနော်တို့တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များများ၏ content သို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်သည်ကိုနားလည်ကြခံရခြင်း) cookies တွေကိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်မည်သို့သုံးပြီးသူတို့ကို disable လုပ်ဖို့
.gumroad.com__ga session ရဲ့အဆုံးမှာ ၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်ရောင်းရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
doubleclick.comDSIS- IDE-ID ကို 30 ရက်ပေါင်း ဤသည် cookie ကိုအွန်လိုင်းကြော်ငြာ re-သတ်မှတ်ခြင်း, optimization, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ DoubleClick ဆိုစှဲပွီးနောကျဘရောက်ဇာတစ်ခု cookie ကိုပေးပို့ click နှိပ်ဒါမှမဟုတ် DoubleClick ဆာဗာခေါ်ဆိုမှုအတွက်ရလဒ်များအခြားလှုပ်ရှားမှု။ Browser ကို cookie ကိုလက်ခံလျှင်ဤအထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
GetClicky_jsuid 30 ရက်ပေါင်း စာရင်းအင်း Web Clicky Tool သည်အမည်ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုစာရင်းအင်းများကိုစုဆောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ စုဆောင်းရရှိသောအချက်အလက်များတွင်အင်တာနက်ပရိုတိုကော (အိုင်ပီ)၊ ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP)၊ ရက်စွဲ / အချိန်တံဆိပ်၊ ရည်ညွန်း / စာရင်း / စာမျက်နှာများ / ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ဆိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုတို့ပါဝင်သည်။ site ကိုလှည့်ပတ်အသုံးပြုသူ၏။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို Clicky စာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည် privacy ကို၏စည်းမျဉ်းများ .
You Tube အတွက် configuration ကနေ2နှစ်ပေါင်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား YouTube ဗီဒီယိုများကို embed လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ YouTube ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်ကိုသင်တစ်ချိန်ကဤနည်းလမ်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cookies များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော် YouTube သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော privacy mode ကို အသုံးပြု၍ embedded video views မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားသော cookie အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ ပြန်ကြားရေးစာမျက်နှာ embedding YouTube ကို
Acumbamail အတွက် configuration ကနေ2နှစ်ပေါင်း ဒါဟာစာရင်းသွင်းမီးစက်ဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုသိရှိလိုပါက
PYPF ၁ လ နည်းပညာဆိုင်ရာ cookies များကို PayPal ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုလုံခြုံစေပါ။ သူတို့ကချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် paypalobjects.com.
ဒီကွတ်ကီးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် disable လုပ်နည်း
သင်၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်မည်သည့် cookies ကိုမဆိုထည့်ရန်မလိုပါကမည်သည့် cookies ကိုမကူးယူမီသင်အကြောင်းကြားရန်ဘရောက်ဇာဆက်တင်ကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ အလားတူစွာသင် browser သည် cookies အားလုံးသို့မဟုတ် third-party cookies များကိုငြင်းပယ်နိုင်ရန် configuration ကိုသင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော cookies များကိုလည်းဖျက်နိုင်သည်။ သင် Browser တစ်ခုချင်းစီ၏ configuration နှင့်သင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းတိုင်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသတိရပါ။
info- at) escape-room.online သည်အထက်ဖော်ပြပါ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးလိုသောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောဘရောင်ဇာများမှဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားသော link များကိုအသုံးပြုသည်။
ကွတ်ကီးမူဝါဒနောက်ဆုံး 20/05/2020 တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်